Ny akanjo tsara indrindra an'ny Hero Academia Heroista ho an'ny lisinao - Hafa
Ny akanjo mahery indrindra amin'ny Akademia Mpihira mahery fo tokony hoheverinao ny mividy
Ity dia lahatsoratra fiaraha-miasa amin'ny RoleCosplay (ho mpiara-miasa).
Tsy miafina hoe ahoana malaza My Hero Academia dia. Ary amin'ny vanim-potoana faha-4 ho avy amin'ny 2019, ny franchise dia hitombo hatrany ary hitombo lehibe eo amin'ny sehatry ny anime.
Raha mitady ianao:
Akanjo cosplay My Hero Academia.
Ary ny zava-drehetra eo anelanelan'ny, Role Cosplay dia nofonosinao.
Andao hizara ny akanjo cosplay tsara indrindra amidy amin'ny andiany MHA.
My Hero Academia Cosplay amidy:
1. Akanjo fitafiana mitafy akanjo Bakugou Katsuki
Bakugou Katsuki Akanjo mitaingina akanjo ivelany Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Akanjo an'i Bakugou Katsuki avy amin'ny My Hero Academia ity.
Ny akanjo sy ny fomba feno dia ampidirina amin'ny habe rehetra (kely ka hatramin'ny XL). Ary afaka mahazo habe manokana ihany koa ianao!
2. Kiraro Cosplay Izuku Midoriya
Izuku Midoriya Cosplay Shoes Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Ny kiraro Izuki Midoriya dia hanampy anao hamita ny akanjo cosplay ho an'i Deku. Ilay maherifo lehibe ao MHA!
3. Nejire Hado Bodysuit Jumpsuit Cosplay
Nejire Hado Bodysuit Jumpsuit Cosplay Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Akanjo Nejire Hado avy amin'ny My Hero Academia - amin'ny endrika cosplay!
4. Nejire Hado Blue Cosplay Wig
Nejire Hado Blue Cosplay Wig Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Ho an'ireo vehivavy mpankafy anime izay te-hilalao tahaka an'i Nejire - ity wig ity, miaraka amin'ny bodysuit dia ho lavorary.
5. My Hero Academia Summer Short Sleeve Cosplay Uniform
My Hero Academia Summer Short Sleeve Cosplay Fanamiana Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Akanjo lava fohy fahavaratra, nalaina tamin'ny akanjo ho an'ny sokajy anime vehivavy ao amin'ny My Hero Academia!
6. Kai Chisaki Akanjo Akanjo My Hero Academia
Kai Chisaki Akanjo Akanjo My Hero Academia Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Akanjo cosplay feno ho an'i Kai Chisaki avy amin'ny MHA.
7. Tokoyami Fumikage Head Props & Cosplay My Hero Academia
Tokoyami Fumikage Head Props & Cosplay MHA Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Ity akanjo ity dia miaraka amin'ny loha ho an'ny akanjo cosplay an'i Tokoyami. Ary akanjo mainty feno misaraka mba hamenoana ny endriny.
tiako amin'ny franxx gurren lagann
8. Izuku Midoriya Battle Costume Anime Cosplay Outfit
Izuku Midoriya Battle Costume Anime Cosplay Outfit Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Izuku Midoriya ’s Battle ankehitriny ny akanjo dia fitafy cosplay ho an'ireo mpankafy anime. Fitazomana ny fitaovana rehetra tany am-boalohany!
9. Tsuyu Asui Akanjo Akanjo Kanto My Hero Academia Cosplay
Tsuyu Asui Akanjo lava tsara tarehy My Hero Academia Cosplay Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Tsuyu Asui lasa a waifu ao amin'ny vondrom-piarahamonina anime noho ny bikany sy ny endriny mahafatifaty.
Ankehitriny dia azonao atao koa ny mampiseho an'io fomba io ihany avy amin'ny My Hero Academia, miaraka amin'ny akanjo cosplay maitso an'i Tsuyu Asui!
10. My Hero Academia Pussy Cat Three Colours Cosplay
My Hero Academia Pussy Cat Three Colours Cosplay Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Manaova akanjo mitovy amin'ilay PUSSY CAT avy amin'ny My Hero Academia. Misy kojakoja sy entana rehetra ao anatiny.
11. Tsuyu Asui Green Battle Costume Cosplay Outfit
Tsuyu Asui Green Battle Costume Cosplay Outfit Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Akanjo maherifo an'i Tsuyu Asui, ampiasaina amin'ny toe-javatra ady amin'ny andiany anime. Raiso eto ilay akanjo feno.
12. Izuku Midoriya MHA Fitafiana akanjo fotsy lava
Izuku Midoriya MHA Akanjo Akanjo Akanjo Fotsy Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Akanjo akanjo fotsy fotsy mangatsiatsiaka ho an'ny cosplay manaraka anao Midoriya. Miaraka amin'ny sarin'ny endrik'i All Might nambolena teo aloha.
13. Akanjo fanamiana manao fanamiana an-tsekoly any Toga Himiko School
Toga Himiko School Cosplay Uniform Outfit Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Toga - ny fahavalon'ny maherifo lehibe dia malala ao amin'ny fiarahamonina MHA. Ary ankehitriny ianao dia afaka manao roleplay miaraka amin'ny fanamiany cosplay.
14. Momo Yaoyorozu Akanjo Cosplay Fototra Anime
Momo Yaoyorozu Akanjo Cosplay Fototra Anime Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Akanjo mena somary ahariharin'i Momo, ary endriny tsy manam-paharoa ny endriny. Izy rehetra nofonosina amin'ny akanjo cosplay tonga lafatra
15. Shoto Todoroki Full Set Anime Cosplay Outfit
Shoto Todoroki Full Set Anime Cosplay Outfit Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Raiso ny sety feno ho an'ny akanjo mafana snap an'i Shoto Todoroki.
16. Shoto Todoroki Halloween Vampire Cosplay
Shoto Todoroki Halloween Vampire Cosplay Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Raiso ny akanjo Halloween vampira an'i Shoto Todoroki amin'ny fotoana mety amin'ny Halloween!
17. Bakugo Katsuki Battle Costume Anime Cosplay
Bakugo Katsuki Battle Costume Anime Cosplay Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Bakugo Katsuki, ilay mpandray anjara fototra dia fantatry ny akanjo fiadiany tokana ao MHA.
Ity akanjo cosplay ity dia miaraka amin'ny akanjo manontolo, fonon-tànana, kojakoja ary izay rehetra ilainao mba hahatsapanao an'i Bakugo amin'ny nofo.
18. Ochako Uraraka Battle Costume Cosplay
Ochako Uraraka Battle Costume Cosplay Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Akanjo ady tany Ochako tany am-boalohany avy amin'ny Hero Exams, ary ny seho ady hafa rehetra amin'ny sarimiaina!
19. Kaminari Denki Black Cosplay Outfit
Kaminari Denki Black Cosplay akanjo Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny kilasy D - Kaminari Denki, sy ny akanjo feno avy any ambony ka hatrany ambany!
20. rehetra mety ho akanjo ady Anime Cosplay MHA
Anime Cosplay MHA rehetra mety amin'ny akanjo rehetra Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Akanjo ady mahazatra rehetra an'i Might, miaraka amin'ny fehikibo, fomba, sary ary izay rehetra nalaina tamin'ny andiany anime.
21. Yamada Hizashi Cosplay Wig Blonde
Yamada Hizashi Cosplay Wig Blonde Atombohy ny miantsena Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Raiso ny volom-bolo adala an'i Hizashi, ilay mpitory ny fifaninanana UA ao amin'ny My Hero Academia!
Mitadiava My Hero Academia Cosplay amidy:
37+ Cool My Hero Academia Notebooks tianao, (amidy)
10 amin'ireo fanaovana doka Deku tsara indrindra avy amin'ny Akademia maherifoko!
dia malalako ao amin'ny tantaram-pitiavana franxx
manga silaka tsara indrindra amin'ny fiainana tantaram-pitiavana
seho fahitalavitra anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra